Xiriirka Kubbadda Cagta Soomaaliya Oo Xariga Ka Jaray Xafiisyo Cusub Oo Laga Hergeliyay Koonfur Galbeed – Goobjoog News
Guddomiye ku xigeenka 1aad ee xiriika Soomaaliyeed ee kubbadda cagta Cali Cabdi Maxamed (Cali Shiine) iyo wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada Koonfur Galbeed Cali Dhuux Maxamed ayaa si wadajir magalada Baydhabo xariga uga jiray xafiisayada ururada horomarinta kubbadda cagta kaas oo si wanaagsan loo qalabeeyay.
Cali Dhuux Maxamed oo ah wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada Koonfur Galbeed iminkana xafiiska wasaarada joogo mudo 2 bilood ayaa sheegay in maamulkiisa u si wanaagsan ula shaqeyndoono madaxda xiriirka Soomaaliyeed ee kubbadda cagta saddex gobol ee Koonfur Galbeed ay gaarsiindoonaa homariminta kubbadda cagta si dhalinyarada xirfada leh ee ku nool loogu faa’ideeyo xulka qaranka iyo kooxaha gudaha.
-Bishii Lasoo dhaafay Maarso Guddomiye ku xigeenka 1aad ee Xiriirka Kubbadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed ayaa socdaalkii ugu horeeyay sanada 2019 ku tagay magaalada Baydhabo,isagoo soo kormeeyay hanaanka ay u shaqeeyaan xiriirka kubbadda cagta iyo Wasaarada isboortiga Koonfur Galbeed wuxuuna waqtikaa kasoo dhagaystay baahida jirta iyo fursadaha ay haystaan.
Abuukar Islaw oo xubin ka ah xiriirka Soomaaliyeed ee kubbadda cagta ayaa sheegay in uu si weyn uu ugu faraxsan yahay horomarka ka socda Koonfur Galbeed xiriir ahaan ay ku kalsoon yihiin aqoonta iyo qibrada Wasiir Cali Dhuux,isagoo intaa ku daray in ay ka sugayaan wax qabada muuqda oo horomar u ah dhalinyarada Koonfur Galbeed oo aad u jecel isboortiga.
Guddomiye ku xigeenka 1aad ee Xiriirka Soomaaliyeed ee kubbadda cagta Cali Cabdi Maxamed (Cali Shiine) waxa uu sheegay in maamulka Koonfur Galbeed oo loo dhisidoono ilaa 12-koox,garsoorayaal iyo macalimiinta si hormarinta kubbadda cagta ay u gaarto dhamaan deegaanka maamulka.
Garoonka kubbadd cagta DR Ayuub ee Baydhabo ayaa iminka waxaa ka socda dhimso balaaran waxaana dhameestirka wajiga labaad bishii lasoo dhaafay si wadajir u dhax dhigay xiriirka cagta,Wasaarada ciyaaraha iyo maamulka degmada Baydhabo waxaana la sheegay in loo dhisidoono qaab cari ah.
Halkan Ka Daawo Warbixin Ku Saabsan Xafiisyada Laga Furay Magaalada Baydhabo